Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder is .......
Unyanzvi: 1280kg / mwedzi
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) Tsanangudzo
Kemikari Name (R) -8-chloro-1-tetrahydro-2,3,4,5-methyl-1h-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate
muchiso Name Belviq
Kirasi yeMishonga 5-HT2C receptor inhibitor
Molecular Wsere 482.31
Biological Half-Life Lorcaserin ane plasma hafu yeupenyu hwe ~ 11 maawa
Solubility Mvura Solubility 0.0709 mg / mL
APane Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inoshandiswa se-anti-obesity drug. Iine basa sechido chekuda kudya uye serotonergic agonist.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder is hydrate ndiyo iyo hemihydrate ye lorcaserin hydrochloride. Inoshandiswa sechirwere chinopesana nekupisa. Iine basa sechido chekuda kudya uye serotonergic agonist. Iine lorcaserin hydrochloride.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inoshandiswa kurapa kuneta kunobatanidza nehotera yepamusoro, kuwedzera kweropa, kana kuti chinonzi 2 chirwere cheshuga.
I-FDA inobvumira iyo Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder kuvanhu vane mafuta akawanda (ane muviri mashizha index, kana BMI, ye30 kana yakakwirira) kana kuti vanopfuura kudarika (vane BMI ye27 kana kupfuura) uye vanewo uremu humwechete- hukama hwehutano hwakafanana hwakadai seChirungu 2 chirwere cheshuga, kuwedzerwa kweropa kwepamusoro kana cholesterol yakakwirira.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inoshanda nekudzora chido - kunyanya kuburikidza nekuita huropi hutachiwana hwe serotonin, neurotransmitter inokonzera manzwiro ekugadzikana uye kugutsikana. Serotonin inosanganisirawo mafungiro; mishonga yakawanda inopesana nemishonga inoshanda nekudzivirira reuptake ye serotonin uye kuchengeta uropi huripo huchashambidzwa mumakemikari. Vatsvakurudzi veArena vanoti zvinodhaka zvavo zvakagadzirirwa kutsvaga chete serotonin receptors dzinokanganisa kudya.
Lorcaserin inotendwa kuti inoderedza kushandiswa kwekudya uye inokurudzira satiety nekusarudza kushandura 5-HT2C receptors pane anorexigenic pro-opiomelanocortin neurons iri mu hypothalamus. Nzira chaiyo yekuita haisi kuzivikanwa.
Lorcaserin pamushandi wezuva nezuva wakakurudzirwa unobatanidza ne 5-HT2C receptors kana ichienzaniswa nezvikwata zve 5-HT2A uye 5-HT2B (ona Table 5), imwe 5-HT receptor subtypes, 5-HT receptor transporter, uye 5-HT reuptake sites .
kunyoresa yeLorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Appetite depressant: Agent iyo inoshandiswa kuderedza kudya.
serotonergic agonist: Nhengo inobatana kune serotonin receptors uye inokwanisa kutevedzera zvinokonzerwa neserotonin nekusimudzira basa re physiologic mumatareji masero. Serotonin agonist inoshandiswa sevanorwisa zvinodhaka, anxiolytics, uye mukurapa kwemasimba emagraine.
Yakakurudzirwa Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Sezvo ruzivo rwakakosha pamusoro pekushandisa Lorcaserin hydrochloride hemihydrate raisagona kuwanikwa, mashoko anotevera ndeokuti ataure chete:
Lorcaserin HCL powder 846589-98-8 inouya mupepeti uye inotorwa kazhinji 1-2 nguva pazuva, kana pasina kana kudya. Lorcaserin inofanira kushandiswa pamwe chete nekodori yakadyiwa kudya uye chirongwa chekuita mabasa.
Nhamba yakakurudzirwa ye lorcaserin ndeye 10 mg inogadzirwa nemuromo kaviri pazuva. Lorcaserin inogona kutorwa pasina kufunga nezvekudya. Lorcaserin inofanira kuregererwa nevarwere vanokundikana kuwana zvishoma kana 5% kuora kwemazuva mashoma nevhiki 12 sezvo varwere havagone kuwana kurasikirwa kwekureruka nekuendesa kurapwa.
kubatsira Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inosarudza 5-HT2C receptor agonist iyo inofungidzirwa kuderedza kudya kwekudya kuburikidza nepakati pePOMC system. Lorcaserin HCL powder zvakabatsirwa:
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inoshandiswa pamwe chete nezvokudya uye maitiro ekurapa kuneta.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder dzimwe nguva inoshandiswa kurapa kuneta kunogona kuwirirana nechirwere cheshuga, high cholesterol, kana kuwedzerwa kweropa.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder haigoni kubata chero hupi hwehutano hwehutano (hwakadai sehutano hwepfungwa, chirwere cheshuga, kuwedzerwa kweropa).
Zvikanganiso yeLorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder inoshandiswa mukurapa kusingaperi kwehutano hwekutakura kune vanhu vakuru vane muviri mashoma index (BMI) ye30 kana kupfuura (yakawanda) sekuwedzera kune kuderedzwa-koriori yezvokudya uye yekurovedza muviri. Inobvumidzwawo kuti ishandiswe nevanhu vakuru vane BMI ye27 kana yakakura (inopfuura simba) uye vane unenge humwe humwe hutano hunokonzerwa nehutano hwakadai soutachiona hwepamusoro (hypertension), kana kuti high cholesterol (dyslipidemia). Zvisinei, inogonawo kuva nemamwe matambudziko. Sezasi:
Tiye anowanzovhiringidza madhara:
-Hyglycemia (shuga shoma yeropa).
Zvimwe zvinowanzoitika asi zvinokonzera mimwe migumisiro yakaoma inosanganisira lorcaserin inosanganisira:
-Ava nematambudziko emagetsi,
-Changisisa mukucherechedza kana kuyeuka,
-Dambudziko kana pfungwa dzekuzviuraya,
-Donho muropa cell count, uye
-Ikuwedzera mune hormone, prolactin.